Global Voices teny Malagasy » Ireo Ankizy “Tsy Hita Maso” Maty Teo An-Tànan’ny Fanjakàna Shiliana · Global Voices teny Malagasy » Print
Ireo Ankizy “Tsy Hita Maso” Maty Teo An-Tànan'ny Fanjakàna Shiliana
Voadika ny 21 Jona 2017 14:27 GMT 1	 · Mpanoratra Connectas Nandika (en) i Erin Gallagher, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Mediam-bahoaka, Tanora, Voina, Zon'olombelona
Ny renin'i Lissette izay, niaraka tamin'ny mpisolovava azy, nitory ny fanjakàna shiliana. Sary an'ny Univisión/ Sebastián Lafaurie, nahazoana alàlana.
Ity tatitra nosoratan'i Daniela Mohor ho an'ny Univisión ity dia navoakan'ny CONNECTAS.  Ny dika manaraka eto ambany dia navoakan'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Ny fahafatesan'i Lissette Villa , zaza 11 taona, tany amin'ny akany fipetrahan'ny ankizy ambany fitantanan'ny fanjakàna shiliana, no nanàla sarona ny krizy iray momba ireo ivontoerana fandraisana ankizy manerana ny firenena. Araka ny angondrakitra ofisialy, teo anelanelan'ny 2005 sy 2016, novinavinaina ho ankizy 865 teo no maty  teo ambany fiahian'ireo ivontoerana ambany fitantanan'ny fanjakàna natao ho fikarakaràna ankizy.
Roa herinandro fotsiny izy dia tokony ho feno 12 taona. Saingy ho an'i Lissette, loharanom-pangirifiriana ny fahatongavan'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Fantany tamin'io taona io fa mety handao ny trano fitaizana ny zaza tsy ampy taona izay nipetrahany hatramin'ny 2014 izy ary ho afindra any amin'ny trano iray hafa any amin'ny kaominin'i Pudahuel ao Santiago. Fantatr'ireo ankizy toa azy tsara ilay toerana — ireo ankizy niharan'ny fanararaotana sy ny tsy firaharahiana, nilaozan'ny fianakaviana, na ireo ankizy nania — ho ny iray faran'izay ratsy indrindra ao anatin'ny tambajotran'ireo ivontoerana fiarovana ao anatin'ny Sampandraharaha Nasionaly Shiliana ho an'ny Ankizy (SENAME ).
Tsy tonga velively tany amin'ilay ivontoerana any Pudahuel i Lissette. Ny 11 Aprily 2016, maty noho ny fijanonan'ny fony izy. Mbola anaty fanadihadiana ankehitriny ny manodidina ny anton'ny fahafatesany. Na efa nisy aza lisitra nalefan'ny Polisy Mpanadihady nilaza fa “fahasemporana noho ny hetsika tsy voatandrina sy tsy fisian'ny fikarakaràna avy amin'ireo mpikarakara azy”, ny fitsirihana ny razana tamin'ny fotoana nahafatesany kosa milaza fa “nisy ratra teny amin'ny tavany”.
Taona iray mahery izao no lasa hatreto, saingy mbola eny anaty fampahalalam-baovao ao Shily ihany ny momba ny nahafatesan'i Lissette Villa. Vantany vao fanta-bahoaka ilay izy, ny tantaran'ny fahantràny, ny tsy fisian'ny fandriampahalemana sy ny herisetra dia nanery ireo Shiliana hanafantoka ny sainy amin'izay manjo an'ireo ankizy efa ho 100.000 faran'izay marefo indrindra ary mikatsaka fiarovana sy fanampiana ara-tsaina avy amin'ny SENAME isantaona.
Tena nampivarahontsana ny vaovao navoaka hatramin'izay: tamin'ny Oktobra 2016, nabaribarin'i Solange Huerta, izay nisahana ny fitarihana ny SENAME  tany afovoamboan'ilay krizy fa teo anelanelan'ny 2005 sy 2016, novinavinaina ho 865 ireo ankizy sy tanora maty teny anivon'ireo toerana fiahiana ankizy. Amin'izany isa izany, tanora 14 taona no mihoatra nanana raharahanà heloka bevava ny 249; ankizy teo ambany fiahian'ny ray aman-dreny na ny havany, tao anatin'ny fandaharanasa fiarovana ny marary any ivelan'ny toerana fiahiana ny 406. Saingy ny vondrona tena nisy fiantraikany be indrindra dia ny nisy an'ireo ankizy 210 izay, toa an'i Lissette, niaina tany anatin'ireo trano fiahiana  noho ny ray sy renin'izy ireny, na ny havany akaiky tsy mahavita mikarakara azy ireo. Tamin'ireny ankizy ireny, antsasany mahery no manana fahasembanana ary eo amin'ny ampahatelony no latsaky ny 6 taona. Ho an'ny 47 tamin'izy ireny, araka ny tatitry ny SENAME, tsy mahafapo ny voalaza ho anton'ny fahafatesana.
Ireo ankizy tsy hita maso
“Nanokatra ny vata-n'ny tsy ampoizina ny raharaha Lissette,” hoy i Sebastián Lafaurie, mpisolovava ny renin'i Lissette, izay nametraka fitarainana manejika ny SENAME. “Taorian'ny fahafatesany, nampanao fanadihadiana tany amin'ireo ivontoerana rehetra manerana ny firenena (manodidina ny 260 eo) ny tao amin'ny biraon'ny fampanoavana, ivontoerana izay nahitàna fanaovana antsirambina sy tsy fahalavorarian'ilay rafitra”:
Fantatray ankehitriny fa anjatony ireo ankizy maty , saingy tsy nisy olona nanao tatitra ny fahafatesan'izy ireny. Adino any ny fisian'izy ireny, satria ankizy izy ireny ary tsy misy miraharaha.
Anuar Quesille, manampahefana amin'ny fiarovana ao amin'ny UNICEF Chile , naneho hevitra hoe:
Nisy fepetra maromaro napetraka ho an'ny ankizy, saingy na teo aza izany, adinon'ny fanjakàna, tsy misy iankinany amin'ny governemanta ankehitriny, ireo ankizy tena marefo eto Shily: ireo izay iharany, izay nohitsakitsahana ny zony ary eo ambany fiahian'ny fanjakàna. Toa io no rantsana iray tena adino be indrindra amin'ny fahazazàna ao Shily.
Tena hita maso ireo fiantraikany. Tao anatin'ireo volana maromaro lasa, hatramin'ny niporitsahan'ny olana ara-drafitry ny SENAME, namoaka tantara manafintohina ireo haino aman-jery: i Jean Alejandro , ohatra, izay nosintonina teny amin-dreniny 39 andro monja torian'ny nahaterahany dia maty teo amin'ny faha-herintaonany noho ny aretina pneumonia mafy nanjo azy, vokatry ny antsirambina nataon'ireo mpikarakara azy. Tantara iray hafa no nivoaka momba ny andianà tanora izay nandositra ireo trano fiahiana ary nisafidy ny hiaina tany aminà toerana fanariana fako tsy mahasalàma tao afovoan'i Santiago, toy izay hiverina any amin'ireo ivontoeran'ny SENAME. Misy ny honohono momba ny fisianà daroka, fanararaotana ara-nofo, fanolànana sy fivarotantena any anatin'ireo ivontoerana. Anatin'ireo fahafatesana, marobe ireo ankizy no namono ny tenany.
María José Ortúzar, psikology sy mpanelanelana amin'ny fianakaviana, izay manana maripahaizana momba ny resaka herisetra an-tokantrano, fanararaotana ankizy sy fanararaotana ara-nofo, niteny hoe :
Tena mampihorona hodi-doha. Tena misy fahafatesana tena izy eto, ny fahafatesan'ireo ankizy anjatony maro, saingy misy koa sarim-pahafatesana amin'ny tsy fahitàna azy ireo. Tsy omena toerana izy ireo. Manohy ny fiainany izao tontolo izao, raha izy ireo kosa any anatin'ny SENAME miatrika toejavatra saro-bahàna, izay im-betsaka no mitondra azy ireo handositra nefa tsy mahafantatra akory izay ho toerana haleha.
Tsy manary toky i María José Ortúzar fa efa manomboka misy fiovàna miseho. “Nisy foana ny olana miaraka amin'ny ankizy eto Shily. Zavatra efa nisoko nandritry ny taona marobe izany,” hoy izy. “Ankehitriny, sambany ilay olana no nabaribary sy ifanakalozana hevitra amin'ny toerana natao ho an'ny daholobe. Misokatra ny adihevitra.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/21/102488/
 Univisión : http://www.univision.com/noticias/america-latina/los-cientos-de-ninos-invisibles-que-murieron-bajo-el-cuidado-del-estado
 fahafatesan'i Lissette Villa: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/proteccion/como-murio-lissette-villa-el-relato-de-la-fiscalia/2017-03-01/133802.html
 ankizy 865 teo no maty: http://www.elcomercio.com/actualidad/michelebachelet-muerte-ninos-jovenes-tutela.html
 ankizy 210 izay, toa an'i Lissette, niaina tany anatin'ireo trano fiahiana: http://www.sename.cl/web/2016/10/03/directora-nacional-del-sename-entrego-cifras-ninos-ninas-adolescentes-adultos-fallecidos/
 UNICEF Chile: http://unicef.cl/web/
 Jean Alejandro: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/10/07/una-muerte-en-el-olvido-el-desgarrador-caso-de-lactante-arrebatado-a-su-madre-por-sename.shtml